Na eo aza ny zava-drehetra, ny iPad ihany no takelaka be mpividy indrindra eny an-tsena | Vaovao IPhone
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, isaky ny misy laharana Tim Cook sy ny orinasa amin'ny iPad ataon'izy ireo izany mba hitaterany ny fihenan'ny fivarotana. Raha ny fahitana azy dia tsy hitan'ny mpampiasa fa tsara ny manavao ny takelaka paoma isan-taona na roa taona tahaka ny ataontsika amin'ny iPhone, saingy toa tsy i Apple irery no orinasa manana an'io olana io.
Omaly 2 Febroary, orinasa mpandalina roa, IDC y Strategy Analytics, namoaka tatitra roa izay nanambaran'ireo varotra takelaka ary amin'ny roa dia afaka mahita ny fomba ny takelaka ny Apple no mbola malaza indrindra, toerana iray tratrany hatreto, na eo aza ny fivarotana takelaka mitohy mihena ary ny vidin'ny iPad dia ambony noho ny an'ny takelaka sisa eny an-tsena.
Ny iPad dia mbola mpanjakan'ny tablette ihany
Tamin'ny 31 Janoary dia nitatitra i Apple fa nanao izany izy ireo amidy 19% latsaka an'ny iPad noho ny tamin'ny taon-dasa, saingy tsy nanakana azy ireo tsy ho orinasa nivarotra takelaka bebe kokoa izany tamin'ny vanim-potoana Krismasy lasa teo. Ary ny fivarotana ny iPad dia nianjera mihoatra ny takelaka faharoa voasokajy: Samsung.
Ny azontsika jerena amin'ny tatitra IDC sy Strategy Analytics dia ireo toerana roa voalohany alain'ny Apple (13.1M) sy Samsung (8M) miaraka amin'ny valiny saika tratra, saingy manomboka miova ny laharana fahatelo. Raha ny Strategy Analytics dia milaza fa amin'ny laharana fahatelo dia Lenovo miaraka amin'ny 4.2M singa amidy, nilaza ny IDC fa amin'ny laharana fahatelo dia Amazon miaraka amin'ireo singa 5.2M.
Fampahalalana mahaliana iray avy amin'ny fandalinana IDC dia ny iPad Pro dia nahatratra 10% ny varotra fotsiny ny takelaka paoma. Inona izany? Eny, tsy mpandalina aho, fa miresaka momba ny takelaka misy ny maodely faran'izay kely indrindra sy mora indrindra aminy aho, manana vidiny € 679, ary izany dia manana 32GB fitehirizana fotsiny nefa tsy 4G. Raha manampy an'io isika dia afaka mividy iPad Air 2GB amin'ny vidiny 32 € na iray 429GB amin'ny € 128, heveriko fa afaka nilaza hoe "fotsy sy ao anaty tavoahangy" isika.
Na izany na tsy izany, ny azontsika hazavaina amin'ny fampahalalana nomen'ny IDC sy ny Strategy Analytics dia ny iPad dia mbola mpanjakan'ny takelaka ihany Ary toa hitohy izany mandritra ny taona maro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Na eo aza ny zava-drehetra, ny iPad ihany no takelaka be mpividy indrindra eny an-tsena
luislaborda dia hoy izy:
Inona no tianao holazaina "na eo aza ny zava-drehetra"? Na eo aza ny vidiny mihoampampana, navelan'i Apple lany andro 4 na 5 taona taorian'ny nividianany azy izy, fa tsy mifanaraka amin'ny rafitra hafa, fa lany bateria afaka adiny vitsivitsy, sns?
Mamaly an'i luislaborda
tonolo33 dia hoy izy:
Ralehilahy, maharitra 4-5 taona ny takelaka heveriko fa be dia be, indrindra ny miteny amin'ny teny teknolojia sy ny fahafantarana fa haingana dia haingana. Namidiko ny ipad 2-ko taorian'ny nahazoako ranom-boasary 4 taona tao, ary fantatro fa raha mijanona tsy mampiasa zavatra mitaky kinova ios ambonimbony ianao dia afaka nahazo 2-3 taona maro hafa azo antoka.
Tsy mahita takelaka eny an-tsena aho fa afaka 4 taona dia afaka manohy mametraka programa na lalao farany tsy misy olana ary milaza aho fa tsy misy. Amin'ireo marika rehetra dia miafara amin'ny fizahana kinova taloha izy ireo hahafahanao mametraka ny vaovao farany
Vidiny, marina fa tsy mora ny ipad, fa rehefa avy nanandrana marika hafa (samsung sy sony amiko) ary afaka mampitaha azy ireo, ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny no manonitra ahy ary izany no antony itohizako amin'ny ipad
Fa toy izao no mitranga amiko, ara-dalàna raha ny mifanohitra amin'izay no mitranga ary ny tsy fitovian'ny vidiny dia tsy manonitra azy, miankina amin'ny karazan'asa hampiasana azy io no hiafarany.
Tsy haiko hoe mandra-pahoviana no maharitra ho anao ny ipad, fa matetika kosa dia andoavako indroa isan-kerinandro (fampiasana mahazatra) ary raha ampiasain'ny zana-drahalahiko hijery sarimihetsika na andian-tantara izany dia afaka mitazona ahy tontolo andro
Mamaly an'i tonelo33
IBM sy United Airlines dia miasa amin'ny rindranasa iOS eo amin'ny sehatry ny orinasa